Ahoana ny fomba fanaovana litera gothic: fampianarana fanazavana fohy | Famoronana an-tserasera
Ny famolavolana endri-tsoratra dia iray amin'ireo dingana izay tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny famolavolana sary. Izany no antony ahitantsika endri-tsoratra isan-karazany, misy serif lava, sans-serif, boribory geometrika, sns.
Androany izahay dia mitondra anao fomba fanoratana izay tsy teraka androany, fa efa nanan-kery nandritra ny taona maro ary ankehitriny dia nahavita nanavao sy ho mpilalao fototra amin'ny etikety rakikira mozika maro, afisy ary na dia ny sakafo fisakafoanana aza, Eny tokoa, miresaka momba ny endritsoratra Gothic isika.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba famolavolana azy ireo izahay mba hahafahanao mamorona tetikasa lehibe.
2 Ahoana ny fandrafetana ny endri-tsoratra Gothic: Tutorial
2.1 Dingana 1
2.2 Dingana 2
2.3 Endrika hafa
3 mpamorona endri-tsoratra
3.2 fotsy noah
Ireo endri-tsoratra Gothic, fantatra ihany koa amin'ny hoe fractured na fractal, dia mifototra amin’ny sora-tanana tamin’ny Moyen Âge, izany hoe avy tamin’ny Moyen Âge ary avy amin’ny abidy latinina. Nanomboka nampiasaina izy ireo rehefa nandeha ny fotoana ary nisongadina ny Baibolin'i Gutenberg andalana 42, nivoatra ho typography maoderina: Fraktur, izay nampiasaina hanoratana lahatsoratra alemà nanomboka tamin'ny taonjato faha-1941 ka hatramin'ny nandraran'i Hitler ny fampiasana azy tamin'ny XNUMX. Amin'izao fotoana izao, maro ireo mpamorona karazana no mamorona karazana endri-tsoratra vaovao avy amin'ny endritsoratra gothic taloha.
Ny toetra ofisialy amin'ity fianakaviana typografika ity dia:
Kapoka matevina mitsivalana sy mitsangana
Kapoka manify sy manjavozavo
Afohy miakatra sy midina
Tifitra be pitsiny
Izany rehetra izany dia mahatonga ny endri-tsoratra Gothic ho endri-tsoratra amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny ductus calligraphic indrindra, izany hoe, sarotra kokoa ny manoratra calligraphically.
Mikasika ny fampiasana, dia azontsika atao ny manamafy fa izy ireo dia nampiasaina tamin'ny endrika misy fiantraikany ara-tantara manan-danja, amin'izany fomba izany, dia afaka mahita azy ireo ao amin'ny arabe taloha, fonosana fromazy na biscuit ary amin'ny zava-pisotro marobe misy fomban-drazana ara-tantara, toy ny labiera.
Mahavariana: Noho ny endriny masiaka sy mahaliana, dia tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX no nanombohan'ny Gothic fantatra amin'ny anarana hoe. hafahafa. Na dia tsy maintsy nisaraka tamin'ny tantara aza izy ireo tamin'ny voalohany noho ny tanjaka lehibe nananan'ny didona sy meccans tamin'ny androny. Tery ny toetrany ary homogene ny dian-kapokany. Ny "g" dia manana haavo roa ary ny "G" ny saokany, tsy toy ny grotesque. Tsara homarihina koa ny haavon'ny x amin'ny litera kely, izay manohana ny fisafidianana an'io karazana litera io rehefa tsy maintsy atao anaty vatana kely ny fanontana.
Neogrotesque: Araka ny efa voalazanay, tamin'ny taona XNUMX, dia nivadika ny dingana ary naverina indray ireo vehivavy Gothic nolavina. Ny fahatsorana sy ny fahitsiana ny grotesques dia nahatonga azy ireo ho tsara indrindra ho an'ny vanim-potoana vaovaon'ny teknolojia ho avy. Saingy tsy noeritreretina firy ny grotesques, mbola meccans tsy misy serifs izy ireo, ka izany no nahatonga ny typographers nanomboka namorona fananganana rafitra kokoa, miaraka amin'ny kapoka homogene kokoa: ny neogrotesques. Afaka milaza isika fa ny famirapiratan'ny neogrotesques ambony indrindra, Hitantsika amin'ny typography Soisa izany taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Fantatray izany Helvetica Neue.
Geometrika: Ity karazana Gothic ity dia toa voasokajy tamin'ny mpitondra sy kompà. Typefaces mahitsy sy boribory, misaina, saika matematika. Noresahina tamin'ny taona roapolo izy ireo, ny vanim-potoanan'ny functionalism ary ny sekoly Bauhaus. Manavaka azy amin'ny boribory ny "o", ny tsy fisian'ny saokany ny "G" ary amin'ny ankapobeny satria toa natao tamin'ny efamira, bevel sy kompà. Matetika isika no mahita ny "a" manao, indray, boribory, tena mitovy amin'ny "d" na ny "o".
Humanista: Ny Gothic Humanist voalohany dia avy amin'ny soratra calligraphie sy ny renivohiny mahazatra toy ny romana sy ny litera kely toy ny sora-mandry mahaolona. Matetika izy ireo dia aseho amintsika miaraka amin'ny lanja asymmetrika amin'ny peratrany sy ny fiafaran'ny zorony. Tahaka ny grotesques, manana "g" amin'ny haavo roa izy ireo, fa tsy toy ireo dia tsy manana ny saokany amin'ny "G". Ny arc ambany amin'ny "e" dia manondro miankavanana. Raha fintinina dia ho Romanina tsy misy finials izy ireo.
Ahoana ny fandrafetana ny endri-tsoratra Gothic: Tutorial
Aorian'ny fampahalalam-baovao fohy momba ny endritsoratra Gothic dia hanazava tsikelikely ny fomba famolavolana azy ireo isika. Tsy maintsy manaraka ny dingana asehonay eto ambany ianao dia ho lasa manam-pahaizana manokana amin'ny endritsoratra.
Mba hamitana ity fampianarana ity dia mila manana fakan-tsary sy programa fanovana eo am-pelatanana ianao. Manoro hevitra ihany koa izahay mba hikaroka izay zavatra mety ahitana ity karazana typografika ity: gazety, gazety, sary hosodoko, sns.
Mampiasa fakantsary nomerika na scanner, maka sary nomerika amin'ny antontan-taratasy izay hitanao fa misy litera gothic. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy manitsy ianao, mba hahatonga azy ireo ho lehibe kokoa, ny litera misy programa fanitsiana.
Atao printy ny sary, azonao atao amin'ny mpanonta anao izany na any amin'ny fivarotana kopia mba hahafahan'izy ireo manonta azy ho anao, raha mila vinyl ianao dia azonao atao ny manonta mivantana amin'ity taratasy ity ary apetaho eo amin'ny toerana tianao. Azonao atao koa ny manova ny endrikao ho tatoazy gothic, amin'ny sary etsy ambany dia manana ohatra ianao.
Soraty ny sary, azonao atao amin'ny mpanonta anao izany na mandehana any amin'ny fivarotana kopia mba hahafahan'izy ireo manonta azy ho anao, eny mila vinyl ianao dia afaka manonta azy mivantana amin'ity taratasy ity ary apetaho eo amin'izay tianao. Afaka koa ianao hanova ny endrikao ho tatoazy gothicAo amin'ny sary eo ankavia dia manana ohatra ianao.
Raha tianao ny hanaitra ny namanao amin'ny fanoratana ny anarany amin'ny litera Gothic, ny zavatra tsy maintsy ataonao mba hianarana ny calligraphie dia ny mijery ireo litera ary mamerina azy imbetsaka, dia ho lasa ianao. vonona hanoratra ny anaranao na izay tianao amin'ny litera gothic.
Azonao atao koa ny misintona abidy gothic. Ampidino ny sary ary manonta azy dia azonao atao ny manao collage amin'ny litera gothic. Amin'ny sary sasany dia azonao atao koa ny mampiasa ny isa gothic, ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahanao na fety Halloween.
Tombanana ny asanao amin'ny alàlan'ny fianteherana azy amin'ny rindrina ary mijery azy avy eo amin'ny 10 m farafahakeliny.. Ankoatra izany, tehirizo fitaratra eo anoloan'ny asanao ary jereo amin'ny fitaratra. Izany dia hahatonga ny teny ho sarotra vakina, ka hanery ny saina hifantoka amin’ireo toetra ara-javakanto amin’ireo teny, toy ny fandrafetana azy, ny fifandanjana ary ny firindrana. Soraty ny fahatsapana ny asanao mandritra ny fanombanana. Ohatra, azonao atao ny manoratra hoe: "Tsy dia misongadina loatra ny andalana."
Avereno jerena ny sary mifototra amin'ny naoty nataonao tamin'ny dingana teo aloha. Avereno io dingan'ny fitsikerana tena sy fanitsiana io mandra-pahafa-ponao amin'ny sarinao momba ny teny.
Loharano: Ipsoideas Agency
Ity misy lisitry ny sasany amin'ireo mpamorona endri-tsoratra tsara indrindra hitazomana anao ho aingam-panahy. Ny sasany amin'izy ireo dia ho fantatrao ary ny hafa ho hitanao.
Matetika izy no nofaritana ho typographer, mpamorona, mpanakanto ary mpanoratra. Niasa tao amin'ny toby iray ao amin'ny nosy kely iray any amin'ny morontsiraka Andrefan'i Kanada, ny asa sariny, ny maha-izy azy manokana, ny asa hafahafa ary indraindray dia nahazo fankatoavana iraisam-pirenena. Manaraka ny fahalianany amin'ny fahasarotana sy ny firafiny, dia fantatra amin'ny endri-tsoratra mahazatra azy i Marian, ny kanto vector amin'ny antsipiriany sy mazava tsara, ny asa tanany mibanjina ary ny fahaizany amin'ny lasitra sy ny haingo.
Mpamorona sary sy endri-tsoratra tsy miankina monina ao Barcelona, ​​​​tanàna nihalehibe izy ary nianatra famolavolana sary tao Bau, Centre Universitari de Disseny. Nianatra Master in Advanced Typography tao Eina izy avy eo, ary nanomboka nanandrana ny famolavolana karazana.
Nanomboka tamin'ny 2008 dia niasa ho mpamorona sary ho an'ny studio samihafa ao Barcelona izy mandra-pahatongan'ny taona 2010 dia nanapa-kevitra ny hifindra any Holandy. Teo izy tamin'ny 2011 dia nianatra ny Master Type and Media tao amin'ny KABK any La Haye.
Miasa tsy miankina amin'ny mpanjifa avy amin'ny faritra samihafa amin'izao tontolo izao izy amin'izao fotoana izao ary mampianatra kilasy typography ao Bau. Amin'ireo tetikasany farany, mendrika ny hanasongadinana ny fiaraha-miasa izay nataony ho an'ny Underware, Jordi Embodas.
Izy dia mpamorona izay niaina ary Izy io dia niforona tany amin'ireo tanàna samihafa toa an'i Munich, Vienne ary Milan. Vao tsy ela akory izay dia tafiditra ao anatin'ny vondrona voafantina misy mpanao typografy 53 nofidian'ny Association Typographique Internationale (ATypI) ao anatin'ny fifaninanana famolavolana karazana iraisam-pirenena Letter 2 ny anaran'ity mpankafy karazana sy toetra ity.
Ny endri-tsoratra Maiola, izay nanombohan'i Burian novolavolaina tamin'ny 2003 ary navoakany tamin'ny 2005 tao amin'ny TypeTogether, dia tompon'andraikitra amin'ny fidirany ao amin'ity klioba ity izay tsy misy afa-tsy ny hatsaran'ny famolavolana typografika.
Mpamorona sary sy mpanao sora-baventy izy, miasa any Barcelone, toerana nahaterahany tamin'ny 1968. Manana ny orinasany manokana izy, Type-Ø-Tones. Fantatra amin'ny maha mpampianatra typography ao Eina, Elisava ihany koa izy ary mampianatra atrikasa manerana an'i Espaina. Izy io dia manana mari-pankasitrahana Laus roa ary mari-pankasitrahana roa momba ny fahaiza-manaony ary ny mari-pankasitrahana Letter.2 avy amin'ny AtypI.
Izy no mpanoratra ny TypoMag, typography amin'ny gazetiboky sy mpiara-manoratra ny boky "Ahoana no hamoronana endri-tsoratra". Avy amin'ny sketch mankany amin'ny efijery, miaraka amin'i Cristóbal Henesstrosa sy José Scaglione.
Manantena izahay fa hanohy hamolavola karazana endri-tsoratra maro hafa ianao ary nahazo aingam-panahy sy nianatra. Ho fanampin'izay, azonao atao koa ny mitsidika lahatsoratra sasantsasany nosoratanay ho anao ary izay ahafahanao manohy mianatra bebe kokoa momba ny endritsoratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fomba fanaovana litera gothic